လူလိုက်ပါအာကာသယာဉ် “Shenzhou-12” ကို တရုတ်နိုင်ငံက ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် လွှတ်တင်မည် - Xinhua News Agency
လူလိုက်ပါ အာကာသယာဉ် Shenzhou-12 နှင့် Long March-2F သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံကို တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုချွမ်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာတွင် ဇွန် ၉ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကျိုချွမ်၊ ဇွန် ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လူလိုက်ပါ အာကာသယာဉ် “ShenZhou-12”ကို ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၂၂ မိနစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုချွမ် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ လွှတ်တင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ လူတင်အာကာသယာဉ် အေဂျင်စီ (CMSA)က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအာကာသယာဉ်တွင် အာကာသယာဉ်မှူးများဖြစ်ကြသည့် နွဲ့ဟိုင်စိန့်၊ လျိုပေါ်မင်၊ ထန်းဟုန်ပေါတို့ (၃)ဦး လိုက်ပါသွားမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်အာကာသစခန်းတည်ဆောက်ရေးကို လုပ်ဆောင် သွားရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ လူလိုက်ပါအာကာသယာဉ် အေဂျင်စီ (CMSA)၏ ဒါရိုက်တာလက်ထောက် ကျိချီမင်က ဆိုသည်။
ဇွန် ၁၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၂၂ မိနစ်တွင် လွှတ်တင်မည့် လူလိုက်ပါအာကာသယာဉ် Shenzhou-12၌ လိုက်ပါမည့် အာကာသယာဉ်မှူး နွဲ့ဟိုင်စိန့်၊ လျိုပေါ်မင်၊ ထန်းဟုန်ပေါတို့ (၃)ဦးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်း ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် အာကာသယာဉ်သည် အာကာသစခန်း ပင်မခန်းဖြစ်သည့် Tianheနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အာကာသစခန်းပင်မခန်း Tianhe ၊ ကုန်တင်အာကာယာဉ် Tianzhou-2 တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ Shenzhou-12 ရှိ အာကာသယာဉ်မှူးများက အာကာသစခန်းပင်မခန်းတွင် (၃)လကြာ နေထိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။Shezhou-12ကို Long March-2F သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကျိချီမင်က ဆိုသည်။ （Xinhua）
The launch will be carried out withaLong March-2F carrier rocket, which will be filled with propellant on Wednesday morning, Ji said. ■
图说1：Photo shows the combination of the Shenzhou-12 manned spaceship andaLong March-2F carrier rocket after it was transferred to the launching area of Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, June 9, 2021. (Xinhua/Wang Jiangbo)